Diplomasia : Midongy toerana ireo be antitra
mercredi, 13 janvier 2021 09:18
Sary nindramina fampiaingoana - Paris
Lasa toeram-pamaharana ny masoivoho malagasy any ivelany.
Misy ny fianarana manokana momba ny diplomasia, izay asa ilana fahaiza-manao matihanina satria hifandray amin'ny firenena maro, ary fitaratry Madagasikara any ivelany. Na ireo fomba fifandraisana, na ny teny ampiasaina, eny hatramin'ny akanjo fitafy, misy dikany avokoa, na ny loko ampiasaina aza.
Taona maromaro anefa izay, dia lasa toerana politika ny toerana masoivoho rehetra, satria toerana fandefasana ireo namanamana, na ireo fahavalo politika mihitsy azy, toy ny hoe garazy hipetrahany tsy hitabatabany intsony.
Manana karama ambony ihany ireo mpiasa diplomaty, ankoatra ny fiarovana manokana azy, misy mihitsy aza no manao bizina izay maha diplomaty izay, ka ampiasaina ny valizy diplomatika, na ny kontenera diplomatika, hanaovana bizina maro samihafa satria tsy savaina ireny valizy na kontenera diplomatika, ary tsy mandoa ladoany rahateo.
Ny sofera sy ny mpamafa trano dia fianakavian'ireo diplomaty avokoa no maro, misy aza rehefa miova ny diplomaty ambony, dia ovaina avokoa hatramin'ny mpamafa trano sy saofera.
Toa ny mpiasam-panjakana rehetra izy ireo, ankoatran'ny ambasadora sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky, dia tokony tsy aharitra ela amin'ny toerana iray, 3 na 4 taona eo, dia mifindra, fa misy ireo dia namboly coco mihitsy, ohatra amin'izany ireo ao Etats-Unis, any Frantsa, Alemana dia efa lasa tompon-tany mihitsy.
Izay fihetsika izay aza no asehony rehefa mandray olona, dia feno havonavona toa azy io masoivoho io.
Ny mampalahelo dia tsy mahafapo ny asa omen'ny masoivoho malagasy any ivelany, na ny haka taratasy fiankohonana, na hanavao pasiporo, dia aman-taonany vao azo. Na téléfonina sy mail aza tsy misy, nefa ao andrenivohitry Paris na New York, tsy ny hofan'izany no tsy ho vita fa iniana ve, satria ny ambasadoro malagasy, firenena faharoa alohan'ny farany raha ny fahanatrana, nefa mandray karama ambony noho ny filoham-pirenena ao amin'ny tany iasany matetika ny ambasadaoro.
Tsy mahagaga ireo goaika antitra izay mahafehy ny tambazotra rehetra no mifikitra amin'ny toerany.
Oviana ny fotoana mba masoivoho hitodika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny firenena Malagasy tokoa ireo masoivoho any ivelany, ary oviana no Malagasy avokoa ireo consulat, satria dia betsaka ireo Consulat malagasy any ivelany no vahiny avokoa no mitana izay toerana izay.
Misy ihany koa ny tokony fandinihina ireo toerana tokony asiana masoivoho, satria efa miova tanteraka ny jeostratezia eran-tany, ary betsaka ny toerana feno Malagasy nefa dia tsy misy masoivoho.
Mila dinihina ihany koa ny fahafahan'ireo Malagasy monina any ivelany mba afaka handray anjara amin'ny fifidianana, fa tsy rehefa tsy voaloa ny Jirama vao miantso ny havana any ivelany andefa western Union, fa rehefa ny zon'izy ireo dia tsy misy.
300 000 000 Euro ny vola alefan'ireo Malagasy any ivelany mandeha aty Madagasikara, mihoatra lavitra ny trosa omen'ireo mpampindram-bola, nefa ny an'ny Malagasy vola afaka amoronana asa, raha hay ny mandamina an'izany.
Ny an'ireo Malianina izao mahatratra hatramin'ny 1 miliara Euro ny azy ny fitambaran'ireo vola alefan'ny fianakaviany an-tanindrazana, izay no nahatonga ilay fitenenana hoe "Retour à Bamako", satria izay vola azon'izy ireo any ivelany dia alefany avy hatrany any Bamako renivohitry Mali.
(Sary nindramina fampiaingoana - Paris)